Mitaona ireo olona izay te-hitahiry ny tontolontsika ny Masons.
Pro7 Galileo: Dokam-barotra momba ny foto-pisainana miaraka amin'ny mpanorina ny PixelHELPER Oliver Bienkowski
Mivoaha, izahao toetra
Miaraka amin'ny iray Model modely manome toky ny asa lehibe for zon'olombelona & maro hafa maha-olombelona momba ny taranaka manaraka fotoana. Rehefa ny PixelHELPER Foundation tsy miankina GmbH latsaka ny vintana mihazo ny "Fikambanana Ifotony Freemasonry"(FHW). Etsy izy andrim-panjakana mpanao asa soa ny freemason tany Alemana. The Masonic Mpikambana ao Pixel Mpanampy mila faniriana indray fotoana ny Revolisiona frantsay, ny tenanao miady mavitrika amin'ny tsy rariny na aiza na aiza misy azy, satria taonjato miditra freemason ho an'ny tsara amin'ny izao tontolo izao ary andramo amin'ny alàlan'ny zavatra anderen Modely raikitra ho. ny freemason miasa mandra-paha 1980 ny anao hopitaly in Hamburg ary mbola miasa ankehitriny Trano fisotroan-dronono in der Tanànan'ny Hanseatic.
PixelHELPER, dia vondrona tsy miankina iraisam-pirenena & fikambanana mpiaro zon'olombelona nentanin'ny idealy ny Freemasons. Tsy misy dikany ny tabataban'izao tontolo izao, mandalo isika, tony sy miadana, tsy misy tahotra amin'ny loza, tanjona ambony amin'ny fiarovana ny tany. Ny finoana fototra dia ny fitsipiky ny Revolisiona Frantsay "Fahalalahana, fitovian'ny lahy sy ny vavy" mila miady amin'ny famerimberenana ny tsy firaharahana politika. Mifanaraka amin'ny teny filamatra: "Fantaro ny tenanao!" ny mpikambana dia manandrana manangona rojom-pananahana manerana an'izao tontolo izao.
Hesorina amin'ny gazety alemà Freemason alemà "Humanität"
Pixel Mpanampy naorina tao 2011 ny mazava mpanakanto & Freemasons Oliver Bienkowski maherin'ny 70 mpiara-miasa, anisan'izany ny 6 Freemasons hafa. Freemasonry dia fatorana ny namana, ny pahamendrehana mirona Bund, ny firosoana Community sy ny asa an'ohatra federasiona izay no efa mitsangana avy amin'ny fomban-drazana ny Eoropeana Fahazavana. Miaraka amin'ny vidiny toerana maha-olombelona, ​​firahalahiana, ny fahafahana, ny rariny, ny fiadanana, ny fitiavana sy ny fandeferana nanome tari-dalana sy ny fitsipika ho an'ny eritreritra sy ny fihetsika ny mpikambana ao aminy.
Ny serasera dia miasa hopitaly sy trano fisotroan-dronono any Alemana
Ny Hopitaly Freemason dia nanokatra ny varavarany tamin'ny 3 Oktobra 1795 tao Dammtorwall ho toy ny andrim-panjakana voalohany amin'ny fanekena ny marary, izay tsy ampy tao Hamburg taloha. Tany am-boalohany ho toeram-pitsaboana ho an'ny ankizivavy no natsangana azy tamin'ny voalohany ary nanitatra taona vitsivitsy taty aoriana ho an'ny ankizilahy mpitaiza. Ny drafitra dia avy tamin'i Friedrich Ludwig Schröder noho ny fanampian'ny rahalahy von Axen Absalom mankany amin'ny roalahy telo, dia i Dr. Bedtmann, Dr. Arotsaho eny amin'ny kintana telo sy ny Cord St. Georg any amin'ny fantsom-panala maintso ny Ferdinande Caroline.
Tamin'io fotoana io dia nipetraka ny United 4 Hamburg (Absaloma tamin'ny 3 gony, St. Georg mankany amin'ny fantsom-bary maintso, Emanuel ho an'ny Maienblume sy i Ferdinande Caroline ho an'ireo kintana telo), izay taorian'ny fifanarahana momba ny fandoavana ny ampahan'ireo fananana nomena azy ireo. Tamin'ny taona 1799 dia niditra tao amin'ilay trano fandraisam-bahiny 'Ferdinand zum Felsen'. Ny fikambanana farany farany ara-toekarena an'ny 'United 5 Hamburg Lodges' dia efa nisy nanomboka tamin'ity taona ity. Ny fitantanana ny fananany iombonana dia teo am-pelatanan'ny 'Treasury sy Alms Comité der Ver. Boaty 5. Io komity io, eo ambany filohany, Brey (Ferdinande Caroline ho an'ny kintana telo), dia nanapa-kevitra ny hanangana ny hopitaly tamin'ny 1883 ary nanome ny fomba ho amin'izany ka hahafahan'ny trano vaovao ao Kleinen Schäferkamp miaraka am-pandriana 06.10.1885 afaka ampiasaina amin'ny 80 Oktobra XNUMX. afaka.
"Maniry aho fa ny idealy asehon'ny Masons dia ho betsaka kokoa amin'ny fiarahamonina. Androany dia mila fandeferana bebe kokoa isika ary fihetsika manahirana mba hitarika ny fiarahamonina ho an'ny olombelona. "
hoy i Ignaz Bubis
Inona no atao hoe mason'ny maoderina?
Ny mason-tsiranoka dia tsy ara-dalàna, tsy mandany vola, fa zavatra ilaina, natsangana tamin'ny maha-olona sy ny fiaraha-monina bourgeois.
Ny tanjon'ny ny Masonic Federaly dia ny fanabeazana ny mpikambana amin'ny maha olombelona marina. -Kery izany no, ny fampiasana ny azony avy tamin'ny Moyen Âge mpipai-bato 'guilds an'ohatra fomba amam-panao, fiaraha fampianarana momba ny raharaha lehibe ny maha-olombelona, ​​dia ny fiahiana ny tena tsara sy ny fitaomam-panahy ho an'ny tena finamanana sy ny fitiavan-drahalahy. Ny olon-drehetra dia tokony mamelatra ireo fitsipika ireo any ivelan'ny efajoro, hampiroborobo ny fanabeazana ho an'ny mpiasa sy manohitra tsy fandeferana. Ao amin'ny efajoro, ny mpikambana dia po amin'ny nizara traikefa ny marika sy ny fombafomba ny tena fanabeazana. Ny mijoro ho olona mendri-kaja sy ny fikarakarana ny firahalahiana sy amin'ny fampiharana ny fitiavana ny mpipai-bato miezaka hahatakatra ny idealy ny maha-olombelona.
Masons ao amin'ny DDR
ORF: Fanadihadiana momba ny Masons
PixelHELPER Foundation | Fanolorana ny Liveapparatintsika amin'ny tontolon'ny TedX, Maraoka Marrakech
Mason'ny fametrahana hazavana mozika, Dusseldorf Alemana
Fametrahana laser laser "Avy amin'ny Avana", Düsseldorf Germany
Ny mpanorina ny PixelHELPER dia nihaona tamin'i Otmar Alt
PixelHELPER Foundation | Ny fihaonana nataon'ny mpanorina ny PixelHELPER Oliver Bienkowski miaraka amin'i Otmar Alt iray amin'ireo mpanakanto malaza ankehitriny mpanao asa tanana mozika malaza
Tsidiho ny tranom-bakoka Masonic
PixelHELPER Foundation | Tsidiho ny tranom-bakoka Mason-kanto ao Bayreuth
Ny fototry ny Confederation Masonique
Ny fototry ny Conférence Masonique dia ny firaisana amin'ny fitarihana hevitra, fanohanana ny fiombonam-pirahalahiana, ary ny fanamafisana ny traikefa an'ohatra. Amin'ny maha-mpikambana ao anatin'ny fanekem-pinoana etika, ny Freemasons dia miaro ny olona, ​​ny firahalahiana, ny fandeferana, ny fitiavana ny fandriampahalemana ary ny rariny ara-tsosialy. Amin'ny maha-fiarahamonina misy olona mifamatotra azy, ny trano fonenana dia toeram-piofanana ho an'ireo soatoavina ireo. Ny mason'ny freemasonry dia toy ny firaisana ara-tandindona amin'ny firindran'ny hevitra sy ny fiarahamonina. Izany no mahazatra azy ireo amin'ny fikambanana hafa rehetra misy tanjona mifandraika amin'izany.
Tahaka ny fanontaniana foana sy foana ny fanontaniana hoe: Inona ny mason-tsimia? Zava-dehibe ny mahatakatra ny firafitry ny Masonic amin'ny maha-firaisan'ny hevitra, ny fiarahamonina ary ny fanehoana an'ohatra. Io karazam-bavaka maro be io dia ahafahan'ny olona manova zavatra maro. Noho izany, ny olona iray dia mety hahasarika ny fifanoherana ara-panahy, raha ny hafa kosa mahita ny tena zava-dehibe ao amin'ny fiarahan'ny olombelona ao amin'ilay trano, ary ny fahatelo, amin'ny mariky ny fombafomba sy ny fombafomba, dia mety hiaina ny foiben'ny fifanekena. Ny mason-tsivana feno fahafaham-po dia tanteraka amin'ny fampifandraisana ny singa rehetra ao aminy.
Mpanorina ny PixelHELPER ao Hessenquiz
Ny asa ara-tsaina
Fantatry ny Freemasons fa ny soatoavina izay ambaran'izy ireo dia efa tafaverina amin'ny fiainana, ary marina kokoa ny fisian'ireo loza efa misy ary tsy maintsy tanterahana amin'ny ezaka vaovao mandrakizay. Ny Confederation Masonic dia tsy manaiky ny fandaharan'asa politika ary tsy mandray anjara amin'ny fifandonana ara-politika. Fa kosa, ny trano fialan-tsasatra dia tokony ho toerana ahafahana manatanteraka ny asa ataon'ny tsirairay manokana amin'ny alalan'ny fampahalalam-baovao sy ny fitoviana. Manohy manatontosa asa goavana ho an'ny fahazavana amin'ny alalan'ny fandresena ny fitsarana an-tendrony ireo mpilatsaka an-tsitrapo, amin'ny fampivelarana ny fahatsapana ny olana amin'ny fotoana sy amin'ny fiezahana mitady fikarohana marina.
Tambato fa fantatrareo hoe misy heviny ny fiainana ny olona na ny vondrona ara-tsosialy dia mitaky zavatra roa: fifandraisana ho fantatra momba ny izao tontolo izao izay velona iray, ary manana soatoavina izay hitari-dalana ny asa. Ny mitoetra mandritra ny alina Antenaina fa nizara vaovao sy fandinihana tari-dalana. Taratry ny zava-misy marina eo amin'ny mazava ny maha-olombelona, ​​firahalahiana, ny fandeferana, ny fiadanana ary ny fitiavana ny rariny ara-tsosialy ihany koa dia afaka manampy ny fanapahan-kevitra fitsipika.
Marina fa tsy fantatry ny Masons hoe ahoana no tokony hijerena ny tontolon'ny olombelona amin'ny antsipiriany satria tsy manazava ny fampiasana ara-politika sy ara-politika izy ireo. Na izany aza, ny hevitra momba ny maha-olombelona sy ny fandeferana dia manome azy ireo ny fahafahana mamantatra ireo fandrahonana sy mandray andraikitra.
TV Interview DW.DE, Mpanorina ny PixelHELPER Oliver Bienkowski, Deutsche Welle TV, Berlin Alemana
Tag Cloud: Century 300 taona Freemasonry Afghanistan Aha Museum Action Star Trek Antoine Leiris fampirantiana Avantgarde bamberg Bauhaus Bayreuth Fihaonambe Charity Concert Berlin bielefeld Bihac Bosnia Brandenburg Bremen Mpirahalahy ao amin'ny Birao Boky Fitondra-ny Andro Mitokana Burkhard Alahady fandoroana ny afo Burns Supper Carl ho an'ny Museum Eintracht Chanson Dstad Franz Reinschauer Frauenhaus Fampirantiana Mason Freemason Freemasonry Freemasonisches Hilfswerk Fitiavan'i Friederike mankany amin'ny tsy fahalainan'i Fürth Georg mankamin'ny Unicorn Golden Georg mankany amin'ny Fikambanana Silic Unicorn Gerd Scherm Glocke eo am-pototr'i Alb Glocke eo am-pototry ny Alb Goethe Golf Faran'ny faran'ny golf Dadabe Dadabe Großlogentag Fihaonamben'ny Grandmaster Gummersbach High School efitrano fandriana Hamburg Hanover Hans-Hermann Höhmann Hoya Homeland Museum Heinrich Albert Oppermann Helmut Reinalter hopitaly Hoya Humanism Fanampiana fanampiana maha-olona Höhmann In Faith Feast Isis sy Osiris Taona Jens Oberheide Johann Johnk John John John John John John John Lee Justus Erich Bollmann kabarett kestner-musie kinderdorf zana-tsakafo laury ankizy ankizy fitsangatsanganana zana-tsoratry ny zaza dia klaus jürgen maintso colloquium kolontsaina fanomezana freemason kurp falz Leipzig Lessing Libanona amin'ireo hazo sedera telo Lichteinbringung lge logen logenbasar trano trano Lortzing Lothar Stitz Ludwigshafen Lübeck mannheim Masonicum Matinee michelstadt Minerva mankany amin'ny hazo palmie telo Music mühlheim Munich Munster Fandraisana an'i New York, Olaubenense Politika Pforzheim Planert Potsdam pottkinder punch miles Quatuor Coronati Purifier Religion Reuchlin Roland Rolf Appel rotary Rumania seidler Mandefa serbien sinn sensitiveness Fampirantiana manokana Freemasonry Fanomezana St Alban any amin'ny afo Mandrakizay Faha-Taonan'i Sanssouci Mitady ireo Symbol misokatra andro Fitsangantsanganana an-tsary momba ny raharaham-panambadiana Boky Victoria Lalana mandeha an-tongotra mankany Lyonesse tsenan'izao tontolo izao Christmas Werner Brix Westphalian Fandriampahalemana Wetzlar Wiesbaden wildeshausen Wilhelm Busch Wilhelm zu den drei Helmen Wilhelm mankany amin'ny andry telo Wolfenbüttel Wolfenbütteler Heimatstiftung zauberflöte Fotoana famindra Ho an'ireo kintana telo ho an'ny renirano telo iraisana Zum volamenaen Rade Zur Alten Linde Zur Hansa any amin'ny fiposahan'ny Zur oberbergischen mahatoky Ao amin'ny firaisankina ao amin'ny regnitz amin'ny fahamarinana sy ny fifankatiavana amin'ny roalahy mpino.
Mitaona ireo olona izay te-hitahiry ny tontolontsika ny Masons. Septambra 4th, 2020Oliver Bienkowski